anabolic steroids ကမ္ဘာမှာအများအားဖြင့်အထင်လွဲမှားမှုများ | AASraw
/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/anabolic steroids ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများအားဖြင့်အထင်လွဲမှားမှုများ
အပေါ် Posted 10 / 12 / 2019 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
၎င်းသည်ယေဘုယျဗဟုသုတရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာယေဘုယျခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်၊ မည်သို့လမ်းပြမည်နည်း။ ဤသည်ကိုငါက၎င်း၏အသုံးပြုမှုခွင့်လွှတ်မဟုတ်သလိုအသုံးပြုမှုတစ်ခုဝန်ခံချက်လည်းမဆိုလိုပါ။
အများအားဖြင့်နားလည်မှုလွဲခြင်း (သို့) ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း - စတီးရွိုက်မျိုးစုံရှိသည်။ ထက်ပိုဆိုးသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိသော corticosteroids ဟို steroidsအကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်မီဒီယာကနတ်ဆိုးများကိုနှိမ်နင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲ၎င်းအသုံးအနှုန်းများသည်များသောအားဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ကောလိပ်ကျောင်းအားကစားများအပါအ ၀ င်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ သူတို့ကမကြာခဏရောင်ရမ်းခြင်းကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အသုံးပြုပါတယ်။ ပရိုဂျက်တာရွန်လည်းမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးတွင်နေ့စဉ်သုံးသန်းနှင့်ချီသောအမျိုးသမီးများအသုံးပြုသည်။ Anabolic steroids (ဤနေရာတွင် AS သို့မဟုတ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်) AS) "Steroids" နှင့်သူတို့နှင့်ဆက်စပ်သောမကောင်းသောအရာများအားလုံးကို ဦး ဆုံးအကြိမ်ကြားသောအခါလူအများစု၏အတွေးများသည်။
လူတိုင်းကမတူကွဲပြားတဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကိုခံစားရတယ်။ လူနှစ်ယောက်အတူတူမဟုတ်ဘူး။ လူအားလုံးအတူတူပါပဲတွေ့ကြုံခံစားရမည်ဟုပြောခြင်းသည်ရယ်စရာပင်။ Lambesis ချည်တွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းလူအချို့သည်၎င်းကိုနားလည်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ ဘေးထွက် - ဆိုးကျိုးတစ်ခုကတော့ယောက်ျား * အသုံးပြုသူအားလုံးကိုအာမခံထားသည်။
က) Testicular Atrophy - သင်များစွာသောပမာဏကိုဖြည့်စွက်သည့်အခါ testosterone သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ HPTA သည်စတင်ရပ်တန့်သွားသည် (testosterone ဟော်မုန်းသည်ထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်သွားပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်အလုံအလောက်ထက်များနေသည်။ ) တိုတောင်းသော၌ဤသည်သင်၏ဘောလုံးကျုံ့စေသည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်သိသာထင်ရှားမှုမရှိပါ။ အများဆုံး 25% လျှော့ချနိုင်ပြီး 50% အများဆုံး။ သင်သံသရာမှထွက်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏ PCT (သံသရာလွန်ကုထုံး) ကိုသူတို့အပြည့်အဝပြန်လာနိုင်သည်။ ဒါအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူး တချို့လူတွေကသူတို့ရဲ့ဘောလုံးတွေကိုအပြည့်အ ၀ အရွယ်အစားရှိအောင်လည်ပတ်နေစဉ်မှာ HCG (Human chorionic-gonadatropin) ကိုသုံးပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာအထောက်အကူပေးပါတယ်။
ခ) ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း / ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း - AS သည်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း (သို့) ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းသည်သင်၏မိသားစုတွင်ဖြစ်သွားပါကဤဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်သင်ရွေးချယ်ခံရမည်ကိုအံ့အားသင့်မိပါလိမ့်မည်။ Bill Roberts သည် Steroids အမျိုးအစား ၂ နှင့်အမျိုးအစား ၂ အကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်။ Type I သည်အဓိကဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သော Testosterone, Tren, Decca, Sust နှင့်စသည်တို့ဖြစ်သည် Winstrol (stanazolol), dbol, anavar, Masteron စသဖြင့်လူအများစုက Winstrol နဲ့ Masteron Enanthate (Drostanolone) ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့် MPB နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခါထိုမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးပမ်းမှုအနေနှင့်၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်မဟုတ်ပါကအခြားမူးယစ်ဆေးများထက် MPB (အထီးပုံစံပြောင်ခြင်း) ကိုပိုမိုသိသာထင်ရှားစွာသက်ရောက်စေသည်။ ထို့အပြင်သိသာထင်ရှားသည့် DHT ဆေးဝါးများ (deca ကဲ့သို့) သည်သင်၏ ဦး ရေပြားအပေါ် ပို၍ ဆိုးလာလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုတိုက်ခိုက်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ Finasteride (propecia / proscar) နှင့်သက်ဆိုင်သော rogaine type shampoos နှင့်အခြားအရာတစ်ခုကိုယူခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ဂ) ဝက်ခြံအချို့ - သူတို့မျက်နှာပေါ်ထွက်လာခြင်း၊ တချို့လူတွေကရင်ဘတ်ပေါ်ကနေပြန်ထွက်သွားကြပြီးတချို့လူတွေရဲ့အသားအရေကတကယ်စင်ကြယ်သွားတယ်။ တနည်းကား, လူတိုင်းကွဲပြားခြားနားထိခိုက်နေသည်။
ဒီ) ၀ မ်းဗိုက်နာခြင်းအောက်မှာဖုံးအုပ်ထားသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ လူတွေပြောတာက AS ကမင်းရဲ့ Dick ကိုကျုံ့အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းမင်းပြောနေတာကိုကြားတာ၊ သူတို့ကမင်းရဲ့ဘောလုံးတွေကိုတကယ်ပြောတာ။ ဒီတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်၊ မင်းရဲ့ဒစ်ကချုံ့မသွားဘူး။ နှာစေးမှုန့်ကိုယူတာဟာမင်းရဲ့နှာခေါင်းကိုကျုံ့စေတယ်လို့ပြောတာလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီသွေးကြောထဲသွေးတွေစီးဝင်လာတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ်အပျက်ကိုသင်ပိုပြီးကျေနပ်မိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ ထပ်မံ၍ ၎င်းသည်သင်အသုံးပြုသောဒြပ်ပေါင်းများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Deca နှင့် Tren ကဲ့သို့မူးယစ်ဆေးဝါးအချို့သည်သင်၏လိင်စိတ်ကိုပိုမိုပြင်းထန်စေနိုင်သည်။ တာဒလာfil (Cialis) (171596-29-5) သို့မဟုတ် Viagra (သင်မလိုအပ်ပါ) သို့သော်စမ်းသပ်ခြင်း (မည်သည့်မျိုးမဆို) ကဲ့သို့သောအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်သင်နံရံများကိုတက်ပြီးချိုင့်ကဲ့သို့ခုန်လိမ့်မည်။ သံသရာအပေါ်ရည်းစား, lol သံသရာအပေါ်ဖြစ်ခြင်းသူတို့ရဲ့ကောင်လေးပျော်မွေ့ပုံရသည်။
င)“ Roid-rage” - ဤကဲ့သို့သောအရာမရှိပါ။ ရိုးရှင်းပါတယ် အကယ်၍ သင်သည်မတည်မငြိမ်သူတစ် ဦး ဖြစ်မည်ဆိုလျှင်သူတို့သည်သင့်ကို ပို၍ မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေလိမ့်မည်။ သို့သော်နောက်တဖန်အခြားအရာများနှင့်ဆေးဝါးတွေအများကြီးကြောင့်လည်းဖြစ်ပေါ်စေမယ့်နေကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေပါကသို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါရှိသည်ဟုပင်သိလျှင်၊ ငါအတူတူပင်အရက်၏ဆိုပါတယ်မယ်လို့အလိုရှိ၏။ လူအများစုသည်၎င်းကိုမထိခိုက်ပါ။ လူအများစုကသူတို့ဟာပိုကောင်းတဲ့ခံစားချက်မျိုးဒါမှမဟုတ်လုံးဝကွဲပြားမှုရှိတယ်လို့ခံစားကြရတယ်။ လူတွေဟာပိုကြီးပြီးနည်းနည်းလေးပိုအားကောင်းနေတာကြောင့်လူတွေကပိုပြီးဆူဆူညံညံဖြစ်လာနိုင်တာကိုကျွန်တော်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကလွဲပြီး“ roid-rage” (အစိုးရအဖွဲ့အစည်း (သို့) မ) ကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတာပါ။
F) သေခြင်း၊ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါပျက်ခြင်း၊
Steroids သည်ဆိုးဆိုးရွားရွားတုံ့ပြန်မှုများကြောင့်လူများကိုမသေစေခြင်းသို့မဟုတ်သေစေနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ခန္ဓာဗေဒ steroids နှင့်သေခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ဖေါ်ပြခြင်းသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများမရှိပါ။ လူများက Zyzz ကိုညွှန်ပြကြလိမ့်မည်။ သို့သော်သူသည်သူ၏မိသားစုနှလုံးရောဂါ / အခြေအနေများသမိုင်းကိုညွှန်ပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Bigger Stronger Faster မှ 2005 မှ CDC ၏ကိန်းဂဏန်းများကိုကိုးကားရန်။
တစ်နှစ်ကို 435,000 ကလူတွေဆေးရွက်ကြီးကနေသေဆုံးတာ
နှင့် anabolic steroids ထံမှသေဆုံးမှု ...... : 3
စတီးရွိုက်၏အန္တရာယ်များမှာအလွန်အကျွံချဲ့ကားပြောဆိုမှုများဖြစ်သည်။ Pitbulls နှင့်အတူအလွန်နှိုင်းယှဉ်။ တစ်နှစ်လျှင်လူများစွာသည်အုန်းသီးများဖြင့်ဒဏ်ရာရခြင်းသို့မဟုတ်လှေကားအောက်သို့ကျခြင်းမှသေဆုံးသည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ စတီရွိုက်ကိုမှားယွင်းစွာပြုလုပ်မိလျှင်၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ ခံတွင်း Steroid တစ်မျိုး (dbol, winstrol, anavar စသည်) သည် hepatoxic ဖြစ်သည်။ အလွန်အကျွံသောက်သုံးလျှင်နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာသောက်လျှင်၊ နှင့်သံသရာတွင်အရက်သုံးစွဲလျှင်သင်၏အသည်းအတွက်အလွန်ကြမ်းတမ်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သွေးကြောပြားများကိုသံသရာမတိုင်မီ၊ နို့ကိုစူးစူးဝါးဝါးစားခြင်းကဲ့သို့သောအရာများကိုသောက်ခြင်းသည်သင်၏အသည်းအပေါ် ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုသက်သာစေသည်။
သွေးပေါင်ချိန်သည်သင်ယူသောဒြပ်ပေါင်းများပေါ် မူတည်၍ ထပ်မံမြင့်တက်နိုင်သည် Methandrostenolone (Dianabol) အမှုန့် နှင့် EQ) ။ တဆေးအနီရောင်တဆေးကိုသောက်ခြင်းသည်ကိုလက်စထရောနှင့် BP ကိုစစ်ဆေးရန်ကူညီနိုင်သည်။ ဒါဟာသေချာပေါက်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တစ်ခုခုပါပဲ။ ထို့အပြင်စက်ဘီးစီးစဉ်တွင် CLEAN ကိုသင်စားသုံးသင့်သည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာပီဇာ၊ ဘာဂါနှင့်ကြော်တို့မစားရခြင်းဖြစ်သည်။
Steroid မွာသွေးကြောမသွင်း - သွေးကြောသွင်းနေကြသည်။ သင့်လက်မောင်းသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရာကိုမဆိုပတ် ၀ န်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင်မရှိပါ။ အကယ်၍ သင်ဟာသွေးကြောထဲဒါမှမဟုတ်အာရုံကြောထဲကိုထိုးသွင်းလိုက်ရင်မင်းသေနိုင်တယ်။ တိကျသောဆေးထိုးသည့်နေရာများရှိသည်။ အလုံခြုံဆုံးသည်ခါးပတ်၊ quad၊ glute နှင့် ventro-gluteal site ဖြစ်သည်။ လူတွေကမြည်း / အချိုမှုသည်အလုံခြုံဆုံးနေရာဖြစ်တယ်လို့မကြာခဏထင်တတ်ကြသည်။ ရောက်ရှိရန်ခဲယဉ်းသောကြောင့်ငါသဘောမတူဘူး။ ၀ ိုင်း ၀ န်းအာရုံကြောသည်ထိုဒေသနှင့်အလွန်နီးကပ်သည်။
Steroid များမှာအံ့ဖွယ်ဆေးမဟုတ်ပါ။ သင်ကအိပ်ရာပေါ်မှာထိုင်ပြီးအာလူးကြော်တွေကိုစားနိုင်ပြီးပိုကြီးလာနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါတွေကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာမင်းပိုက်ဆံဖြုန်းတာတောင်မနှောင့်နှေးသင့်ဘူး။ သင်ဆဲလုပ်ဖို့ရှိသည်။ သန့်ရှင်းတဲ့အစာကိုစားရမယ်။ အရာအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်ရ ဦး မည်။
Pro- ဟော်မုန်း သင်ကသူတို့ကို GNC / Complete Nutrition / နေရာတိုင်းမှာ ၀ ယ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် ပို၍ အန္တရာယ်များသောကြောင့်မကြာခဏသင်ထိုတွင်အမှန်တကယ် PCT ဆေးများကိုမ ၀ ယ်နိုင်ပါကပြန်လည်ကောင်းမွန်ရန်အမှန်တကယ်ကြမ်းတမ်းသောလမ်းအတွက်သင်ရောက်နေလေ့ရှိသည်။ ဤမျှများပြားသောကလေးငယ်များသည် TRT တွင်ကျန်ရှိနေသေးသောဘဝများကြောင့်အဆုံးသတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒီစတိုးဆိုင်များကိုဆန့်ကျင်တရားစွဲဆိုမှုအပြီးတရားစွဲဆိုမှုရှိခဲ့ပုံကိုငါနားမလည်ကြဘူး။
176 Views စာ
အဆိုပါထိပ်တန်း 10 testosterone ဟော်မုန်း Ester: သင်တို့အဘို့အညာဘက်ဖြစ်သော?
MK-677 (Ibutamoren) ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းသည်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါသလား? Sarm ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း [2019 NEW]	SARM SR2019 ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဝယ်ယူမှုလမ်းညွှန် 9009